Thwebula HijackThis 2.0.5 – Vessoft
HijackThis – a software ukuskena futhi ususe izinsongo ehlukahlukene. Isofthiwe ikuvumela ukuba ahlanze computer yakho kusuka amagciwane, worms, i-spyware, malware njll HijackThis aqalaze izindawo sokugxeka ebhukwini, kwakha uhlu izinto ezisolisayo futhi ivumela umsebenzisi ukwenza isinqumo ukuthi ukususa noma isitoreji of amafayela. Isofthiwe Ubuye a esibonakalayo elula enembile.
Scan futhi ususa izinsongo ehlukahlukene
Kwakha uhlu izinto ezisolisayo
Interface Simple and enembile
Amazwana on HijackThis:
HijackThis Ahlobene software:
Antiviruses Isofthiwe ukuthola nokususa amagciwane. Isofthiwe ikuvumela ukuskena uhlelo lwakho yezinhlobo ezahlukene amagciwane, spyware kanye nezinye izingozi.
English, Français, Español, Deutsch... Avast 12.3.3154 Free Antivirus futhi Premier; 12.1.3076 beta Internet Security...
Antiviruses I unqulo wesi arab idume kuvikeleke izinhlelo ngokumelene izinhlobo ezihlukahlukene izinsongo. Isofthiwe uyakwazi ukugcina amaphasiwedi yomsebenzisi kwezokuphepha nokuvikela inethiwekhi ekhaya ngokumelene spyware.
English, Français, Español, Deutsch... Eset 8.0.319.0 Smart Security futhi Nod32
Antiviruses Isofthiwe wemfanelo wokuvikela idatha yomuntu siqu ngokumelene izinsongo inethiwekhi. Antivirus inikeza isivikelo malware kanye spyware.
English, Українська, Français, Español... AVG 2015 build 5577 Free, AntiVirus futhi Internet
Antiviruses Ithuluzi ukuvikela ngokumelene amagciwane, spyware kanye rootkits. Isofthiwe inikeza ukuhlala ephephile ku-inthanethi futhi uhlola traffic for izinsongo kunokwenzeka.
English, Français, Español, Deutsch... AdwCleaner 6.042
Antiviruses System nokwenza Ithuluzi ukucinga bese ukhipha amamojula adware. Isofthiwe aqalaze system yakho nangempumelelo ususa wamathuluzi, amayunithi kanye nekwandzisa okungadingekile.
Spybot - Search futhi Destroy 2.4.40.0
Antiviruses Ithuluzi ukubhekana spyware. Isofthiwe kwenza ukwenza ukuhlaziywa eningiliziwe ohlelweni bese ukulawula esebenzisa ukuqala ebhuthini.
English, Français, Deutsch, Italiano... HitmanPro 3.7.15.281
Antiviruses Ithuluzi eliphumelelayo ukuthola nokususa izinhloso ezinonya ngokusebenzisa ukuhlaziywa zokuziphatha kanye nobuchwepheshe ifu.
English, Français, Español, Deutsch... Panda Antivirus 2015 15.0.1 Gold, Global, Internet futhi Pro
Antiviruses Ithuluzi ukusebenza ukuthola nokususa amagciwane. Isofthiwe zivikela izinsongo ahlukahlukene futhi ikuvumela ukuba ivimbe i ukufinyelela abadala website.
English, Français, Español, Deutsch... 360 Total Security 9.0.0.1085
Antiviruses The okunokwethenjelwa software antivirus ubuchwepheshe besimanje ukuqinisekisa ukuvikeleka okuphelele kohlelo. Futhi isofthiwe isekela uhla amathuluzi ezengeziwe ukuhlanza nokwandisa uhlelo.
English, Español, Deutsch, 中文... RogueKiller 11.0.8
Antiviruses Ithuluzi okukhulu ekunqandeni ngokumelene amagciwane of izinhlobo ezahlukene. Isofthiwe isebenzisa ubuchwepheshe obehlukene ukuhlonza izinsongo futhi kwenza ukuwasusa kalula.
English, Français, Español, Deutsch... GPS Utility 5.28
Amamephu Ithuluzi ukulawula ukucubungula ulwazi GPS. Isofthiwe iqukethe iqoqo amathuluzi awusizo futhi likuvumela ukuba bashintshane idatha nezinye izinhlelo zokusebenza noma amadivaysi.
Hetman Partition Recovery 2.4 Standard futhi Portable
Akwazi ukugcina I elula kusho ukubuyisela amafayela ngephutha isuswe noma ezilahlekile. Isofthiwe isekela spectrum ebanzi ezahlukene izingxenye system for the alulame idatha.
English, Українська, Français, Español... Baidu Antivirus 5.4.3.1489
Antiviruses Isofthiwe unqulo wesi arab ukuthola futhi ususe amafayela ayingozi. Isofthiwe isebenzisa izinjini ahlukahlukene unqulo wesi arab ukuvikela izindawo ezahlukene uhlelo.
English, Français, Español, Deutsch... XnView 2.39 Standard, Extended futhi Minimal
Isithombe Ithuluzi ukubuka futhi basebenze ihluzo amafayela. Isofthiwe ikuvumela ukuba sisebenzise imiphumela ehlukahlukene futhi ukuguqula amafayela ifomethi athandwayo.
English, Afrikaans, Українська, Français... Autoruns 13.62
System nokwenza Ithuluzi ukulawula ukulayisha ngokuzenzekelayo kwezicelo, amasevisi kanye izingxenye. Isofthiwe ikuvumela ukulungisa ekuqaleni othomathikhi-akhawunti amaningi.
Internet Explorer 11, 10 futhi 9
AVG 2015 build 5577 Free, AntiVirus futhi Internet
Google Chrome 54.0.2840.93, 55.0.2883.35 beta futhi 56.0.2905.0 dev
Avast 12.3.3154 Free Antivirus futhi Premier; 12.1.3076 beta...